Isiponji sokuhlamba imoto
Ukucoca & ipolishi mitt
Iinyani zenyani kunye nezinto zokwenziwa
Ungayikhetha njani itawuli ngentsebenzo yexabiso eliphezulu?
Inkangeleko: iitawuli ezilungileyo zithambile kwaye ziqaqambile ngombala, nokuba itawuli eprintiweyo okanye ecacileyo, okoko nje izinto zibalulekile, zenziwe ngokugqibeleleyo, kufanele ukuba zintle kakhulu.Itawuli elungileyo inepateni ecacileyo kwaye ijongeka ngathi yenziwe ngombala. ...
Zeziphi izixhobo ozifunayo ukucoca imoto yakho
Iitawuli ze-Microfiber: kuba umbutho ubuthathaka kakhulu, ungaze uyonakalise imoto xa ucoca imoto.Imveliso inamandla amakhulu okufunxa amanzi, umthamo wokufunxa amanzi amaxesha angama-610 kunetawuli yesiqhelo, ngamaxesha angama-23 kunelaphu le-deerskin. Itawuli yemoto kwindawo yokuhlamba imoto, ayizukuba ...
Izinto eziluncedo nezingalunganga zeetawuli ze-microfiber
Ukukhethwa kwezinto zetawuli kubaluleke kakhulu, itawuli yefayibha eqaqambileyo ayizikhuphi iinwele, ayichongi imibala, inesondo esilungileyo esikhumbeni, yiyo loo nto ifunwa ngumthengi emarikeni, ke, ekugqibeleni yeyona nto intle kakhulu ifayibha itawuli elungileyo?
Ngokokujonga kwabaxumi, iitawuli ezili-10 ezilungileyo ezipholileyo ngo-2021
Ixesha lokupholisa emva kokuzivocavoca yinxalenye ebalulekileyo yayo nayiphi na inkqubo yokomelela komzimba - kodwa kuyacaca ukuba ukuhlala upholile kulo lonke ixesha lokuzilolonga kubaluleke ngokulinganayo. Inzululwazi ibonisa ukuba ukwehlisa ubushushu bomzimba kunokwandisa ixesha lokuzilolonga, ngaloo ndlela kuphuculwe ukusebenza komzimba. Iimbaleki ezininzi ezinobuchule ...
Zithini izinto zokwenza itawuli microfiber?
Ifayibha itawuli yodidi luhlobo lomgangatho ophezulu kunye netekhnoloji ephezulu yendwangu eyimpahla eluhlaza. Itawuli yefayibha eqaqambileyo yenziwe nge-polyester kunye ne-brocade edityanisiweyo eveliswe kwi-polyester engenisiweyo kunye ne-brocade particles. Microfiber filament kuyinto esemgangathweni ipholiyesta 8020 umgangatho kunye brocade edityanisiweyo fila ...
Itawuli yeMicrofiber 'inokuphefumla'
Ilaphu lefreyiti yefreyithi enoburhabaxa inokuthamba okuhle, imbonakalo yokuxelisa iinyamakazi, ukoma okuhle, umphumo wepesika yesikhumba sevelvet, ukuma nkqo kunye nokusebenza ngokugqwesileyo. Olu hlobo lwezixhobo lusetyenziswa ngokubanzi, kwaye lungasetyenziswa kakhulu kwimpahla, ukucoca, ukosula, isikhumba esenziwe ngumntu kunye nezinye izinto ...
Zeziphi iiglavu ezifanelekileyo ukuhlanjwa kwemoto?
ngomphathi ku 21-02-20
Ukuhlamba iimoto akunzima, kodwa ungenza umsebenzi ube lula ngokuthenga iiglavu ezikumgangatho ophezulu. Yongeza isepha encinci, ibhakethi okanye amabini kunye namanzi, kwaye unokuba nemoto ekhazimlayo, necocekileyo. Jonga ukhetho lwethu lweemveliso ukuze ufumane ezona glavu zihamba kakuhle kwimarike. I-Chenille micr ...
Izinwele zokomisa itawuli microfiber
Xa kuziwa kwimikhwa yasemva kokuhlamba, isenzo esiqhelekileyo kukukhetha nje itawuli ekufuphi kwaye uyiyeke yome. Nangona kunjalo, itawuli oyikhethileyo inokuphazamisa iinwele zakho, ngakumbi ukuba iintambo zeenwele azilunganga. Iitawuli zeMicrofiber zihlala zinconywa ukukhawulezisa ixesha lokumisa kweenwele, kwaye f ...
Usebenzisa ntoni ukuhlamba imoto yakho?
Imibhobho yamanzi yokuhlamba imoto: Kukho imibhobho yamanzi yokuhlamba imoto kwimarike, enokwahlulwa ibe yinayiloni kunye nemibhobho elukhuni ngokwezinto ezahlukeneyo, kwaye zixhotyiswe ngoomatshini bokufafaza. Abanini bemoto kufuneka banxibelelane kuphela nombhobho wamanzi ukufezekisa isiphumo sokucinezelwa kwamanzi ...
Athini amanyathelo okuhlamba imoto?
Ukuhlamba imoto kufuneka kuthathele ingqalelo kumanyathelo, kungenjalo kulula ukuphula ipeyinti yemoto kwaye ichaphazele ukubonakala. Ndiza kukuxelela ukuba hlwayela uhlambe imoto yakho ngolu hlobo lulandelayo: 1. Okokuqala susa iphedi yangaphakathi yemoto kwaye uyicoce. 2. Hlamba rhabaxa umphezulu wemoto ngamanzi, kwaye uhlambe ngononophelo ...
Umahluko phakathi kwetawuli yekotoni kunye netawuli microfiber yokufunxa amanzi
Iitawuli zomqhaphu kunye netawuli microfiber ziindawo ezimbini ezahlukileyo zokufunxa amanzi. Umqhaphu ngokwawo ufunxa kakhulu, xa kusenziwa iitawuli ziya kungcoliseka ngento enamafutha, ekuqaleni kokusetyenziswa kwetawuli ecocekileyo engafaki manzi, emva kwexesha lesithathu okanye lesine ...
Yintoni itawuli microfiber?
I-Microfiber ikwaluhlobo oluphezulu, ubugcisa obuphezulu bempahla eyolukiweyo. Ngenxa yobubanzi bayo obuncinci, ukuqina kokugoba kweMicrofiber kuncinci kakhulu, kwaye ifayibha iziva ithambe kakhulu. Inomsebenzi ococekileyo wokucoca kunye nefuthe lokungenisa amanzi kunye nokuphefumla.
Siza kuyibona inkqubela phambili ngokudibeneyo yexabiso labanini zabelo, ixabiso labasebenzi kunye nexabiso lomthengi.
Yongeza:I-Shangde Plaza, i-8 Kangle Str, iShijiazhuang 050051, China
© Copyright - 2010-2022: Onke amalungelo agciniwe. Iingcebiso - Imveliso eshushu - Imephu yendawo
Ikhithi yokuhlamba imoto, Ukuhlamba imoto kwilaphu, Isikhumba seChamois siyathengiswa, Microfiber ithawula Car Ukuhlamba, Ukucoca imoto ilaphu, I-100% eyiyo yesikhumba segusha Chamois,